I-Instagram DM eku-PC - Ungahlola kanjani futhi Uthumele Umlayezo? - Komphakathi
Phakathi kwezinhlelo zokusebenza zokuxhumana nabantu, i-Instagram ikhuphuka ngokungaguquki ezinhlwini futhi iba yintandokazi kwabaningi. Kuyinto uhlelo lokusebenza olujabulisayo olunamandla okwabelana ngamavidiyo, izithombe, izindaba, namavidiyo we-IGTV manje. Ngamanye amagama, kunakekela zonke izici ezibalulekile zokuxhumana nabantu ezenza kube lula kuwe ukuxhumana nabantu. Ngokufanayo, inketho ye-DM iyisengezo esifanelekile.
Ngenxa yokuhlangana kwepulatifomu, manje usungangena ku-Instagram ku-PC. Noma kunjalo, ungahle ubhekane nezinkinga ezithile ngenkathi ufinyelela inketho yomlayezo wangasese. Ngalokho, sikulethela umhlahlandlela osheshayo wokukusiza. Awusoze waba nenkinga yokuhlola noma ukuthumela imilayezo ku-Instagram nge-PC yakho ngalezi zinketho.
Imihlahlandlela eminingi ye-Instagram:
Susa i-Akhawunti ye-Instagram
Landa ividiyo ye-Instagram
Yini i-DM ku-Instagram?
Umlayezo oqondile uyindlela ekwenza ukwazi ukuthumela imiyalezo eyimfihlo kubasebenzisi ku-Instagram. Lesi sici senza i-Instagram isikhungo esihle kakhulu sokuzijabulisa. Ungabeka amazwana ezithombeni nakumavidiyo, wabelane ngezindaba noma ngokuthunyelwe, noma ukuxhumana.
Ibuye inikeze amanothi wezwi kubasebenzisi, futhi ungabelana ngezithombe zakho namavidiyo kwimilayezo eqondile. Ngaphandle kwesithunywa ku-Instagram, kuzwakala kuphelele ukuxhumana nabantu.
Ingabe kukhona umkhawulo wemilayezo eqondile?
Kubukeka sengathi ayikho inketho yokuthi uthumele amanothi wezwi kwi-PC okwamanje. Kodwa ungabelana ngezithombe noma ufinyelele ikhamera ye-PC yakho ukuze uthwebule izithombe zamanje futhi uzabe. Unenkululeko yokuthanda okuthunyelwe komunye nomunye nemiyalezo. Ngaphezu kwalokho, ungathumela imiyalezo.
Ngakho-ke, ezicini eziningi, iyafana nohlelo lokusebenza olusemthethweni olunemikhawulo ethile. Kodwa-ke, ungalindela ukuthi i-Instagram iqoqe izibuyekezo ezizayo ezokuvumela ukuthi wenze okuningi ngohlelo lokusebenza. Uma imfuneko yakho eyinhloko ukuthola isici se-DM, ifeza injongo ngokwanele.
Ungayithola Kanjani i-Instagram ku-PC?
Ukufinyelela isici sokuthumela imiyalezo, kufanele usebenzise i-Instagram kwi-PC. Sihlola zonke izindlela ezaziwayo zokukusiza ukhethe indlela engcono kakhulu ekufanele.
Kunezindlela ezintathu ezaziwayo: Isiphequluli, i-App, neBlueStack. Ngayinye yalezi inikeza ngezici eziningi nokusebenziseka okulula kunendlela edlule. Zikhethe ngokuya ngezidingo zakho:
Inguqulo Yesiphequluli Ayisekeli i-Instagram DM -
Ungangena kalula ku-Instagram kwi-PC yakho ngokuvakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-Instagram. Faka imininingwane yakho, futhi uzokwazi ukusebenzisa iningi lemiyalo. Kukunika amandla wokubheka okuphakelayo, izindaba, nakho konke okunye. Kukhona ukubuyela emuva okukodwa kuphela, ukungabi khona kwenketho ye-DM.
Ngakho-ke, ngeke ukwazi ukufinyelela i-DM's Instagram ngale nketho. Akukho ongakwenza ngakho futhi. Okungcono kakhulu ongakwenza ukusebenzisa imibono ukukhuluma nabantu noma ukuhlangana nabantu.
Ngakho-ke, Udinga ukulanda i-App ku-PC yakho.
Izindlela ezinhle zokulanda i-Instagram App ku-PC:
Indlela # 1: Sebenzisa iMicrosoft App Store
Indlela esebenza kahle kakhulu yokuthola i-DM ye-Instagram kwi-PC ukufaka uhlelo lokusebenza olusemthethweni. Ungayilanda ku-Microsoft App Store. Azikho izindleko. Kumahhala kubasebenzisi. Noma kunjalo, ungakwenzela kuphela amawindi 8 noma ngaphezulu. Yini indlela?
Iya ku Isitolo Sohlelo Lokusebenza SeMicrosoft futhi useshe i-Instagram.
Thola uhlelo lokusebenza lapho. Inqubo yokufaka izoba nge-othomathikhi.
Uma kungazenzakaleli, ungalandela inqubo ngesandla.
Qalisa uhlelo lokusebenza lwe-Instagram kusuka ku-PC yakho.
Ngena ngemvume ku-ID yakho ye-Instagram esemthethweni noma udale entsha.
Lapho usungene ngemvume, ungabona umcibisholo ekhoneni eliphezulu kwesokudla, ngokufana nohlelo lokusebenza olusemthethweni lwe-Instagram lwama-Smartphones. Ungachofoza kuyo ukuze ufinyelele imilayezo eqondile futhi uyijabulele, ngokufana nohlelo lokusebenza lwefoni yakho.
Indlela # 1: Sebenzisa ama-Bluestacks
Ngabe ufuna ukujabulela i-Instagram ngqo ukuthi injani ku-smartphone yakho? Ngemuva kwalokho ungathembela ku-BlueStacks ngalokho. Kuyindlela ye- I-emulator ye-Android iyatholakala nge-PC amapulatifomu. I-BlueStacks ivuselela uhlelo ngalunye futhi ilwenze luhambisane ne-PC yakho. Kungadinga ukuthi ungene ngemvume ku-ID yakho ye-Google ngokusebenzisa i-emulator ukuze ujabulele ipulatifomu.
Ngokufanayo, udinga i-RAM enhle namandla wokucubungula ukuxhasa ama-BlueStacks. Ngenxa yendlela eyazi kahle, ingathatha umthelela ekusebenzeni kwesistimu yakho. Ama-specs we-PC yakho azonquma ukusebenza kwe-BlueStacks yakho. Nazi izinyathelo okufanele uzilandele ukuthola i-Instagram kuma-Bluestacks we-PC:
Faka i-BlueStacks kusuka kuwebhusayithi esemthethweni nge ngokuchofoza lapha .
Qalisa ama-Bluestacks bese ungena ku-ID yakho ye-Google.
Iya esitolo sokudlala uthole i-Instagram.
Yifake bese uyiqala.
Ngena ngemvume ku-ID yakho ye-Instagram.
Manje usungalujabulela uhlelo lokusebenza ngendlela ongayijabulela ngayo ocingweni.
Uhlobo lweBlueStacks likulethela izinketho zamanothi wezwi, phakathi kwezinye ze-PC. Ngokuhambisanayo, uma une-PC yama-specs aphansi, ingaphendulwa noma isalele kakhulu ongayisebenzisa kahle. Ngakho-ke, yiziphi izindlela okufanele uzikhethe ezizoncika kokuncamelayo nezidingo zakho.
Ungavumeli noma yini ikuvimbe ekufinyeleleni kuzici ezigcwele zohlelo lokusebenza lomphakathi oluthandwayo. I-Instagram isebenza ngokungaguquguquki ukukulethela umuzwa omuhle womsebenzisi. Namuhla, sekuvame kakhulu emhlabeni jikelele. Manje usungathola abantu ngisho nangemininingwane yakho yokuxhumana ku-Instagram. Konke okudingeka ube ne-ID yakho yokungena nephasiwedi ukufinyelela i-Instagram. Uma usebenzisa i-PC yomunye umuntu, qiniseka ukuphuma ngaphambi kokuhamba.
IWindows izama ngayo yonke indlela ukukulethela isipiliyoni esiphelele se-Instagram, kepha kuzothatha isikhathi. Kuze kube yileso sikhathi, ungasebenzisa izindlela ezinikezwe ngenhla futhi ujabulele izici zokuthumela imiyalezo ze-Instagram nezinye izinketho kwi-PC yakho ngokwanele.
Ungayidlala kanjani iPUBG Mobile ku-PC?
Sondeza iWindows 10
I-HBO Max vs HBO Manje - Yikuphi okungcono kakhulu ngo-2020?
Imidlalo Engcono Kakhulu Ye-Wii Okufanele Uyidlale ngo-2020
ubusuku obubodwa kuphela ama-putlockers agcwele ama-movie
thola izinhlolovo zamakhadi wesipho se-amazon
i-disney kanye nokungabonakali ku-roku
roblox mahhala ukudlala
sakaza i-movie ku-chromecast kusuka ku-pc
ubukhansela kanjani ubulungu obuyinhloko e-amazon